एजेन्सी– अभिनेता जोन अब्राहम बलिउडमै फिटनेस र शानदार ज्यानका लागि चिर परिचीत नाम हो । उनको सुगठित शारिरीक बनावट बलिउडका अन्य अभिनेताका लागि प्रेरणाकै स्रोत बनेको छ। ४५ बर्षका जोन बिगत १५ वर्षदेखि फिल्म क्षेत्रमा ब्यस्त छन् । उमेरले ४५ कटेपनि उनको तन्दुरुस्त र मसलदार शरीरका कारण धेरै दिवाना भएका छन् । तर यो कसरी सम्भव छ त भन्ने सबैको जिज्ञासाको बिषय हो । उनले आफ्नो फिटनेसका लागि के के गर्छन् त ?
जोन अब्रामको शारीरिक बनावट
बलिउडमा सबै भन्दा फिट शारीरिक बनावट भएका अभिनेतामा पर्दछन् जोन अब्राहम । जो ४५ बर्षको भए पनि नवजवान अभिनेता जस्तै देखिने अब्राहमका आज पनि लाखौं फ्यानहरु शारीरिक बनावटकै कारण उनको अभिनय हेर्न रुचाउने गरेका छन् । कलेज जीवनमा बास्केट बल तथा फुटबल फ्यान अब्राहम निकै उत्कृष्ट खेलाडी पनि हुन् । अब्राहमको यस्तो शरीर छ कि जतिबेला उनी आफ्नो तौल चाहे जति बढाउन अथवा घटाउन सक्षम हुन्छन्।
जोन अब्राहमको डाइट योजना
बिहानः पास्ता (दुधबाट बनेको प्रोटिन युक्त खाना, सलाद)
दिउसोः रोटी–तरकारी, स्टीम माछा, उम्रीएका गेडागुडी, दही तथा ३–४ वटा गाँजरका टुक्राहरु
साँझः अण्डा, केही मात्रमा आलुबाट बनेका परिकार, स्याउ, सुन्तला, मेवा तथा दूधबाट बनेका प्रोटिनयुक्त खानेकुरा ।
रात्रीकालिन भोजनः सामान्य खाना, जुनेलो, फिंगर मिल्ट (एक प्रकारको कोदो), रोटी, सलाद, समान्य रसयुक्त खाना तथा तरकारी
अब्राहम पूर्णताय भेजिटेरियन खाना खान मन पराउँछन् तर पनि शरिरमा प्रोटिनको मात्रा पूरा गर्नका लागि उनी आण्डा र माछाको सेवन गर्ने गर्दछन् । उनि एक दिनमा ७–८ वटा अण्डा खाने गर्दछन् । उनी प्रोटिनयुक्त पाउडरका साथ बनेका खानेकुरा समेत सेवन गर्ने गर्दछन् । उनी प्रोटिनकै लागि बिभिन्न फलफूल तथा तरकारी पनि बढी सेवन गर्ने गर्दछन् । अब्राहमले आफ्नो तन्दुरुस्ती कायम राख्नका लागि आवस्कमात्रामा प्रोटीन, कार्बोहाईड्रेड, पोटासियम, फ्याटी एसिड, ओमेगा ३ फ्याटी एसिडको समेत सेवन गर्ने गर्दछन् ।
अब्राहम गुलियो खानेकुरामा मात्र फलफूलको रसमात्र सेवन गर्ने गर्दछन् । अब्राहम कल्यैपनि मदिराजन्य पदार्थको सेवन गर्दैनन् । उनी बिशेषत समयतालिका अनुसारनै खानपान गर्दछन् । अब्राहमले साझ ४ बजे पश्चात कनै पनि जंकफुड या अन्य खानेकुराहरुको सेवन गर्दैनन् । अब्राहमले जम्मा मिलाएर दिनमा ५० प्रतिशत प्रोटिन, २० प्रतिशत कार्बोहाइड्रेड, २० प्रतिशत फाइबर, १० प्रतिशत एन्टी अक्सिडेन्टयुक्त खानाको सेवन गर्दछन् ।
अब्राहम के भन्छन् त?
अब्राहम आफ्नो शरीरलाई फिट र स्वस्थ्य बनाउने सम्बन्धमा भन्छन्, ‘शरीरलाई फिट र स्वास्थ्य बनाउन एकदमै महत्वपुर्ण कार्य हो। अझ यसलाई निरन्तरता कायम गर्न भने नियमितता र अनुशासनको महत्वपुर्ण स्थान रहने गर्दछ। म आफ्नो शरीरलाई स्वास्थ्य र फिट राख्नकालागि कुनै पनि कसर बाँकी राख्दिनँ किनकी शरीर भनेको एउटा मेसिन हो र यस मेसिनलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’
जिम गर्नका लागि समय जति दिन सकीन्छ, त्यतिनै योग अभ्यासमा पनि ध्यान दिन रहेको उनी बताउँछन्। आफू त्यसका लागि इमान्दार रहेको उनको जिकिर छ। 'योगले मात्र शरीरलाई फिट बनाउन त सकlन्न तर योगलाई कसरतको नयाँ तरिकाबाट अपनाउन सकिन्छ,' उनी भन्छन्, 'वर्कआउट, आराम र आहारा यी ३ कुरा शरीरका लागि अत्यन्त महत्वपुर्ण हुन् । यदी कुनै एकको मात्र कमी भयो भने शरीरमा नकारात्म असर पर्न जान्छ।'